Free Blu-ray Software: Bluray Player iyo Bluray gubi
> Resource > DVD > Free Blu-ray Software inay Play iyo Guba Saxannada Blu-ray
Blu-ray cajalid ku guuleystay dagaalka HD qaabka ugu danbeyn. Si kastaba ha ahaatee, waxa aan horumariyo sida ugu dhakhsaha badan dad badan oo ka filayaan. Kani waa mawduuc weyn waa in la derso sababta Blu-ray ma aha oo caan ah. Sida ku saabsan in my opinion u gaar ah, oo hal gacan, waana mid aad u ballaaran, Dhanka kale, baahida sidaas ma aha xoog. Haddii cajalid Blu-ray waa khasab in nolol maalmeedka, waxaan qabaa in dadka intooda badan ku bixin lahaa, waxaa ka. Si kastaba ha ahaatee, tan iyo DVD ku hagaagsan ayay iigu shaqaysa, bal sidee baan ku qaataan lacag dheeraad ah oo ku saabsan drive Blu-ray iyo cajalladaha Blu-ray?
Mid ka mid ah doorasho guud oo laga yaabaa xagjirka ah waa in: uusan Sony qabaa in dad badan oo maraykan ahi doqon ku filan oo ay iska tuurina ciyaartoyda DVD si ay u soo iibsadaan drives Blu-ray? Maqaalkani waxa aan sii wadi doonaa wada hadlaan on this topic. Iyada oo mar ay u dhacaan, Blu-ray bedeli doonaa DVD, laga yaabee. Haddii aad qabto drive Blu-ray iyo cajalladaha, oo aad u baahan tahay software-ka Blu-ray ugu wanaagsan lacag la'aan ah , oo aad ku sugan tahay meeshii saxda ahayd.
Free Blu-ray Player si uu u daawado Movie Blu-ray on PC
DAPlayer waa ciyaaryahan xor ah caadiga ah multimedia desktop for Windows, kaas oo sidoo kale waa ciyaaryahan Blu-ray oo lacag la'aan ah. Waxa ay taageertaa cajalladaha Blu-ray ganacsi oo macmal ah. Labada BD + iyo AACS ilaaliyo cajalladaha Blu-ray ayaa la ciyaari karo iyada oo ciyaaryahankaan Blu-ray oo lacag la'aan ah. Nidaamka audio ee tayada sare ee sidoo kale waxaa laga heli karaa: ilaa 8 channels nidaamka audio, qas audio 2 channels headphone iyo codka ku wareejin. DAPlayer isticmaali technology audio sare sida DTS, TrueHD, AC3 / Dolby. In kasta oo ciyaaro HD video, isticmaalka processor ay yar tahay tan iyo markii ay la filaayo in la MMX SSE SSE2 SSE3 Intel tilmaamaha processor iyo taageero processor Multi-Core iyo technology Hyper-Threading. Download ciyaaryahan Blu-ray oo lacag la'aan ah.
Free Blu-ray gubi in Guba HD Movie u Daawashada on HDTV
ImgBurn uu leeyahay fudud user interface, laakiin waa la aamini karin ii ah in ImgBurn gubi karaa cajalid Blu-ray (labada BD R / RE). Hadda waxaan doonayaa in la yidhaahdo, ImgBurn waa DVD lacag la'aan ah iyo Blu-ray gubi ugu awooda badan. Waxaa kale oo lacag la'aan ah in codsiyada gubashadii ganacsiga sida Nero, Roxio, ama Corel ee Gubashada.
Si aad u gubi cajalid Blu-ray la Blu-ray ImgBurn gubi lacag la'aan ah, hubi in aad keeno wax fayl BD saxda ah (oo ay ku jiraan "BDMV" folder iyo "SHAHAADO" folder.), Iyo sidoo kale xulashada UDF 2.5 ama ka sarreeya nidaamka faylka. Download free Blu-ray ImgBurn gubi oo arka tutorial Blu-ray gubashadii halkan haddii loo baahdo.
Talo: Waa maxay BD-R / RE?